အွန်လိုင်း Learn | USAHello | USAHello
တချို့ကအသစ်ရောက်ရှိလာသောကြောင့်အသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမရှိခြင်းနဲ့တူကိစ္စရပ်များကိုအင်္ဂလိပ်လူတန်းစားမသွားနိုင်. သူတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူချင်သောသူတို့အဘို့များစွာသောရွေးချယ်စရာရှိပါတယ် ဆက်ဖတ်ရန်
အခမဲ့အွန်လိုင်းGED®့ Prep Classes ရဲ့
အွန်လိုင်းပေါ်မှာသင့်GED®ယုံကြည်စိတ်ချရသောအဘို့အလေ့လာမှုနှင့်သင့်အလုပ်အခွင့်အလမ်းများကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်. အဆိုပါဒီပလိုမာသင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအထက်တန်းကျောင်းပြီးစီးခဲ့သူတစ်ဦးကဲ့သို့တူညီသောဗဟုသုတအသိပညာများရှိသည်ပြသထားတယ်။ ဆက်ဖတ်ရန်
အမေရိကန်နိုင်ငံသားစမ်းသပ်ဘို့သင့်ကိုပြင်ဆင်မည်လိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးကအခမဲ့အွန်လိုင်းလူတန်းစား. နိုင်ငံသားအဖြစ်, သငျသညျအမျိုးသားရေးရွေးကောက်ပွဲတွင်မဲပေးရန်နှင့်သင့်အသိုင်းအဝိုင်းအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆက်ဖတ်ရန်